လက်ကား Hybrid Jade No.1 အစောပိုင်း ရင့်ကျက်ချောမွေ့သော အစိမ်းရောင် အရေခွံ squash မျိုးစေ့ ထုတ်လုပ်သူ နှင့် ထုတ်လုပ်သူ |Shuangxing
Hybrid Jade No.1 အစောပိုင်း ရင့်ကျက်ချောမွေ့သော အစိမ်းရင့်အစေ့များ
အမှုန့်မှိုအနည်းငယ်၊ ZYMV၊WMV2 ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
Jade No.1 အစောပိုင်း ရင့်ကျက်ချောမွေ့သော အစိမ်းရောင် အရေခွံ squash အစေ့များ
1. မျိုးစေ့ကြဲမှ ရိတ်သိမ်းချိန်အထိ ၃၈ ရက်ခန့် အရွယ်ရောက်ပြီးသော မျိုးစိတ်များ။ပုံပန်းသဏ္ဍာန်သည် ချောမွေ့ပြီး ဖြောင့်စင်းသော ဆလင်ဒါ၊ ဗိုက်မပါ၊ အစိမ်းဖျော့ရောင်၊ အလွန်တောက်ပသော gloss.3.အမှုန့်မှိုအနည်းငယ်၊ ZYMV၊WMV2.4 ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။အပူချိန်မြင့်သည်ဖြစ်စေ နိမ့်သည်ဖြစ်စေ အသီး၏အဆက်မပြတ်ထွက်နိုင်မှုသည် အလွန်အားကောင်းသည်။အထူးသဖြင့် ဖန်လုံအိမ်နှင့် လယ်ကွင်းအမျိုးမျိုးတွင် စိုက်ပျိုးရန် အထူးသင့်လျော်သည်။၆။စီးပွား​ရေးအရမ်း​ကောင်းတယ်​။စိုက်ပျိုးအမှတ်-
1. ဒေသရာသီဥတုအလိုက် အပင်ရာသီအလိုက် မတူညီသော ဧရိယာများ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ နိုင်ငံတကာ ထိပ်တန်းအဆင့် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စမ်းသပ်မှုအခြေစိုက်စခန်းများသည် ဟိုင်နန်၊ ရှင်ကျန်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံရှိ အခြားနေရာများစွာတွင်ရှိပြီး မွေးမြူရေးအတွက် ခိုင်မာသောအခြေခံအုတ်မြစ်ချထားသည်။
3. သင့်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု က ဘယ်လိုလဲ။
အစမှအဆုံးအထိ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးကိုအာမခံရန်အတွက် အမျိုးသားကုန်စည်စစ်ဆေးရေးနှင့်စမ်းသပ်ရေးဗျူရို၊ အာဏာပိုင် Third-party Testing institution၊ QS၊ ISO ကိုအသုံးပြုပါသည်။
ယခင်- Naivy Chinese လိမ္မော်ရောင် အော်ဂဲနစ် ရွှေဖရုံစေ့
နောက်တစ်ခု: SXTS No.1403 ပန်းရောင်စပ် ခရမ်းချဉ်သီးအစေ့များ
စပ်မျိုး Squash မျိုးစေ့
စပ်မျိုး Squash မျိုးစေ့များ
Squash မျိုးစေ့ စိုက်ပျိုးခြင်း။
Squash မျိုးစေ့များ စိုက်ပျိုးခြင်း။
Squash နှင့် ရွှေဖရုံစေ့
အစေ့မပါသော အနီရောင် အသားမည်း ဝက်ခေါက် အရွယ်ကြီး ရေ...
အရည်အသွေးမြင့် အသီးကြီး F1 မျိုးစပ်ဖရဲမျိုးစေ့များအတွက်...
ရောဂါဒဏ်ခံနိုင်ရည် အထူးကောင်းမွန်သော F1 မျိုးစပ်မျိုးစေ့များ...
2021 မျိုးစပ်မျိုးစေ့များ ကြီးထွားရန်